Politika · Jona, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Jona, 2012
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Jona, 2012
Ejipta: Fampahafantarana Ny MorsiMetatra
Taorian'ny 32 taona nitondran'i Hosni Mubarak, manana filoham-pirenena vaovao sy rindrambaiko vaovao ny Ejiptiana mba hanaraha-maso ny fizotry ny asan'ilay filoham-pirenena vaovao Mohamed Morsi ary ny fivoaran'ny fanatanterahana ireo toky 64 goavana nataony nandritra ny fampielezan-kevitra notanterahany.
Myanmar: Mankalaza ny Tsingerintaona Nahaterahan'i Aung Ireo Mpampiasa Aterineto
Azia Atsinanana 26 Jona 2012
Nandefa fiarahabana an'ilay mpitarika ny mpanohitra, Aung Suu Kyi izay any Eoropa noho ny fivoahany ny firenena voalohany indrindra taorian'ny roampolo taona izao, ireo mpampiasa aterineto ao Myanmar. Manontany tena ireo mpampiasa aterineto ny amin'ny antony tsy nandrakofan'ireo tambajotran'ny mediam-panjakana ny fanambarana nanolorana an'i Suu Kyi ny Loka Nobel an'ny fanriampahalemana.
Iran: Hiran'ny Fahafahana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Jona 2012
Ny United4Iran, fikambanana iray tsy mitady tombontsoa manao fampielezan-kevitra momba ny zon'olombelona any Iran, dia manao dingana miaraka amina rakikira ao anaty aterineto voatokana hamelona indray ny fanantenana hisian'ny fahalalahana miteny ho an'ireo Iraniana.
Espaina: Nitory ny Banky Bankia Ireo Tafintohina
Eoropa Andrefana 19 Jona 2012
[Amin’ny teny espanola avokoa ny rohy rehetra raha tsy misy ny fiovana] Vitany ihany nony farany , haingana tsy araka ny nanampoizana azy. Nametraka fitoriana tao amin’ny Audiencia Nacional ao Madrid ny hetsiky ny 15M, noho ny fanaovana hosoka tamin’ny kaonty sy fisolokiana, entina hanenjehana ireo tompon’andraikitra tao amin’ny Bankia, ka...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Jona 2012
Angola 18 Jona 2012
Ireo fikambanana mpiaro n y zon'olombelona sy ireo bilaogera dia samy niteny faholo fa tandindonin-doza ny fahalalahana miteny ao Angola, amin'ny alàlan'ireo mafàna fo mpiangaly mozika. Mandritra izany fotoana izany dia natao tao Lisbonne ny fanomezam-bohinahitra ho an'ny mozikam-panoherana angoley izay ny tarika N'Gola Ritmos tamin'ny taona 50 sy 60. Fitetezana ny lasa izay mahatonga ny tena hisaina ny an,kehitriny ara-politikan'i Angola, nefa miha-manakaiky hatrany ny fifidianana.